Chii Chinonzi Mission Of Wiki? - Semalt Anoziva Mhinduro
Oliver King, uyo Semalt nyanzvi, anoti Wiki inobatsira seIndia Encyclopedia iyo inogona kuzvirumbidza zvakasiyana siyana. Ndiyo imwe yenzvimbo dzakawanda dzinoshandiswa pawebsite nekuda kwekubudirira kwayo pakupa ruzivo rwakakosha. Mushure mekusikwa kwe "Persoonia terminals," iyi shanduro ine zvinyorwa zvinodarika mamiriyoni mashanu zvinotaura nyaya dzakasiyana. Masangano akasiyana ane chikwata chekutaura ruzivo rwavo kune dzidziso dzakasiyana-siyana munyika yose - miami club casino no deposit bonus codes. Masayendisiti anoshandisawo Wikipedia kuti ataure zvitsva zvinoshandiswa nesayenzi.
Uyezve, chero zvinyorwa pa Wikipedia zvinopa mazita anokosha uye zvinyorwa. Kune mifananidzo yakananga pamwe nekubatana uye zvidzidzo kune chero zvinyorwa zvese. Vanhu vanogona kutaurirana ne Wiki kuti vawane mazano pamisoro yakasiyana-siyana. Chero chero munhu anoshandiswa anobvumirwa kuverenga, kuchinja, kuudza uye kugovera pfungwa dzake pane chero chinhu. Kugadzira nyaya yakareba kwenguva pfupi, Wikipedia haina kushandiswa nemunhu chero upi zvake munyika. Uyewo, vashandisi vanogona kuumba mavokiti avo emushumo.
Pakati pepamusoro-soro 35 mazita akawanda anonyanya kufanirwa, Wikipedia ndiyo yega yebasa rekusungirirwa newebsite inoda nzvimbo huru yekugamuchira nzvimbo. Inogadziriswa pane imwe nzvimbo yekutambira nzvimbo inopfuura 30 terabytes. Vatsvakurudzi vanofungidzira kuti nyaya dziripo pamapeji eWedipedia dzinoshandisa zvinyorwa zvingasvika 18million. Izvi zvinyorwa zvinopfuura 2,5 biliyoni peji maonero zuva rega rega. Nokudaro, Wikipedia ine ruzivo rwakakura ruzivo, rwakapfuura zvose zvidzidzo zvepasi rose. Vashandi vanogona kubatana ne Wiki kuti vaite mabasa akawanda.
Wikipedia yakatangwa musi wa15 Mutumbi 2001. Yokutanga kuoneka kwemavara ezvinyorwa zvayo kwakabuda munaNovember mugore iroro. Wikipedia yakawana mamiriyoni maviri ezvinyorwa zvegore ra2007. Pakazosvika 2009, yakange yakabhadhara mamiriyoni matatu uye yakawana mamiriyoni mana muna 2012. Imwe yenheyo dzayo dzinosanganisira kugovera nyika nekuwana ruzivo rwevanhu vose!
Pasinei nokubudirira uku, Wikipedia inoramba iri munzira inoenda kune zvinangwa zvayo. Kubva pane zvinyorwa zvayo zvemamiriyoni mashanu, zvakashamiswa kuti zvinoda mamiriyoni anopfuura mamiriyoni ezvinyorwa kuvhara chikamu chikuru chezvinangwa zvavo. Kuunganidza huwandu hwevo ruzivo rwevanhu pane webusaiti yakaoma haisi basa rakaoma kuita. Mukukurukurirana neRiber, pane inoda kuva nemamwe magwaro anofukidza dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana dzepasi. Kuda kwewebsite inoenda kumadokero kunogona kuuya senzira yakakanganisika.